Dowlada Maraykanka oo Laashay Qaraar ka dhan Israel oo Golaha Amaanka loo Gudbiyay – Daily Som
Waxaa aad usii qasmaya Xaalada Murugsan ee Magaalada Gaza iyada oo ay Dowlada Maraykanka horjoogsatay qaraar ay soo diyaarisay dowlada Kuwait oo xubin ka ah golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay kaas oo lagu doonayey in lagu cambaareeyo xasuuqa ay Israel wado Magaalada Gaza.
Dowlada Maraykanka oo looga bartay waayadii ugu dambeeyay uxaglinta iyo difaacida Yahuuda ayaa umuuqda mid dhagaha ka faraytsanaya cambaareynta Yahuuda la beegsadeen mudaharaadyaasha reer Falastiin ee ku sugan Marinka Gaza.
waxaana la qorshaynayaa in maanta ay kulan deg deg ah ka yeeshaan Qaramada Midoobay iyada oo habeenimdaii xalay aya Dowlada Kuwait Golaha Amaanka u gudbisay qoraal horudhac ah oo ay soo diyaarisay, kaasi oo loogu baaqayey in Golaha uu qaraar kasoo saaro xasuuqa shalay ka dhacay Marinka Gaza, iyadoo qoraalkaasi lagu xusay in baaritaan caalami ah lagu sameeyo dilalka ay geysteen ciidamada yahuuda.
Maraykanka oo kamid ah xubnaha joogtada ah ee golaha amaanka ee qaramada Midoobay lehna awooda VETO power ka ayaa si deg degleh ku qaadacay qaraarkan, waxaana la filayaa in kulanka maanta Golahaasi yeelan doono si lamid ah ugu difaaci doonto Israel.
Dowlada Maraykanka oo Laashay Qaraar ka dhan Israel oo Golaha Amaanka loo Gudbiyay added by Staff on May 15, 2018